﻿	ကပ်ခွာပြား သည် သဘာဝပတ်၀န်းကျင်အတွက် မကောင်းဘူးလား ? | Find My Method
ကပ်ခွာပြား သည် သဘာဝပတ်၀န်းကျင်အတွက် မကောင်းဘူးလား ?
Posted on ဒီဇင်ဘာ 23, 2020 by fmm@admin
ကပ်ခွာပြား မှဟော်မုန်းအချို့ အမျိုးသမီး၏ဆီးမှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၎င်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားအီစရိုဂျင်ရင်းမြစ်များထက် နဲပါတယ်။
စက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များ၊ ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုံးသောဆေးများမှ အက်စထရိုဂျင် အားလုံးသည် ကပ်ခွာပြား မှအမျိုးသမီးဆီးတွင်ရှိအီစရိုဂျင်ထက် ပိုမိုများပြားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောက်ပါတယ်။
Posted in ကပ်ခွာပြား, မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ